Foxconn waxay ka bilaabaysaa Maraykanka dhismaha warshad baabuurta korontada ku shaqaysa ee Maraykanka | Waxaan ka imid mac
Waxay u muuqataa in wax walba ay ka socdaan Apple si loo soo saaro waxa laga yaabo inay yihiin qaybo ka mid ah baabuurka korontada. Xaaladdan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka timid Asia Nikkei, oo lagu daabacay mareegaha caanka ah MacRumors, shirkadda u soo saarta alaabo aad u tiro badan Apple iyo shirkado kale ayaa ku tabarucda daalka oo dhisi doonta samaynta qaybaha baabuurta korontada ee Maraykanka iyo Thailand sanadka soo socda.
Foxconn waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee ay Apple la shaqeyso maalmo ka horna waxay meesha ka saartay in Meksiko ay tahay goobta warshadan baabuurta korontada ku shaqaysa, hadda ka dib markii warbixinta cusub ee la dusiyey la tilmaamay inay ku jirto Wada -xaajoodyo lala galay saddex gobol oo Maraykan ah si loogu daro warshadahan.
Baabuurka korontada ee Apple ayaa mar kale soo garaacaya maalmahan xagaaga waxaana sanado la sheegay in gaadhigani ku dhici karo maskaxda Apple. Hadda wax walba waxay tilmaamayaan inay bilaabi karaan habka wax soo saarkooda inta lagu jiro sannadkan ama kan xiga.
Marka hore waxaa la yiri Foxconn waxay u adeegsan doontaa warshad Mareykan ah inay u dhisto gaadiid macaamiisha FiskerIn kasta oo ay jiri karto tallaabo wax -soo -saar aad u gaaban oo loogu adeego Apple sidoo kale haddii loo baahdo. Warbixinno dhowr ah ayaa tilmaamaya in Foxconn ay ku dhowdahay inay soo saarto qaybo ka mid ah baabuurkan loo malaynayo Apple, laakiin waxaas oo dhami had iyo jeer aad bay u fog yihiin hadda, marka hore waa inaan ka bilowno warshadaha oo laga yaabee sannado badan inaan arki doonno dhaqdhaqaaqyo badan oo Apple ah tixgelin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Foxconn waxay bilawday dhismaha warshadda baabuurta korontada ee Maraykanka
Apple waxay rabtaa AirPods in loo isticmaalo si loo qiyaaso heerka neefsashada ee dadka isticmaala